Harry Styles "Jacaylka Dalxiiska" Dhammaadkii wuxuu la kulmay baahi weyn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Harry Styles "Jacaylka Dalxiiska" Dhammaadkii wuxuu la kulmay baahi weyn
GRAMMY Award® ku guulaysta xidigta caalamiga ah ee Harry Styles ayaa noqon doona fanaankii ugu horeeyay ee fannaanka ah ee furitaanka weyn ee UBS Arena ee Belmont Park, NY, Axada, Noofambar 28 isagoo ah gabagabada Jacaylka Dalxiiska 2021. Tigidhada waxa lagu iibin doonaa laga bilaabo Jimcaha, Noofambar 5 saacada 12 duhurnimo at Ticketmaster.com.
Baahida weyn awgeed iyo si loo hubiyo in taageerayaashu ay si toos ah u helaan tigidhada, diiwaangelinta horudhaca bandhigan ee UBS Arena, oo ku taal soohdinta Queens iyo County Nassau, ayaa la heli karaa iyada oo la sii marayo barnaamijka Taageerada La Xaqiijiyay ee Ticketmaster hadda ilaa Talaadada, Noofambar 2 saacada 12ka duhurnimo. Taageerada la xaqiijiyay ayaa dhici doonta Khamiista, Noofambar 4 saacada 12ka duhurnimo iyadoo dadwaynaha guud la iibin doono laga bilaabo Jimcaha, Noofambar 5 saacada 12ka duhurnimo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga heli karaa https://hstyles.co.uk/tour.
Xubnaha Kaarka American Express waxay heli doonaan iibka hore si ay u iibsadaan tigidhada Axada, Noofambar 28 show. Amex Presale waxa uu socdaa Khamiista, Noofambar 4 saacadu markay tahay 12 duhurnimo ilaa 10 galabnimo ET ka hor dadweynaha guud ahaan. Si loo calaamadeeyo dhamaadka safarka Harry ee aduunka, American Express waxa ay aad ugu faraxsantahay in ay soo celiso "American Express X Harry Styles Love Bus" - Khadka Fiican ee loo waxyooday, qaabka 70-meeyadii oo la qurxiyey baska kaas oo la daah furay bilawgii socdaalka ku dhawaad ​​laba sano. ka hor ee Los Angeles.
Goobta UBS Arena, Xubnaha Kaadhku waxay marin u heli karaan soo gelid degdeg ah waxayna ka iibsan karaan qayb gaar ah oo ka mid ah alaabta Harry Styles ee dhammaan goobaha ganacsiga ee goobta oo dhan.
American Express waxay dhawaan ku dhawaaqday faa'iidooyin badan oo dheeri ah oo ku saabsan iskaashiga madadaalada ee kala duwan oo ay ku jiraan gelitaanka godka dalxiisyada xulashada, bandhigyada Xubinta-kaliya ee kaadhka, meelaha laga soo galo iyo meelaha lagu nasto ee goobaha lammaanaha, iyo baayacmushtarka gaarka ah, taasoo ka dhigaysa waayo-aragnimada madadaalada ee ka wanaagsan #AMEX. Laga soo bilaabo presale ilaa hordhaca tignoolajiyada lacag bixinta la gashan karo si kor loogu qaado waayo-aragnimada xafladda muusiga, American Express waxa ay u heellan tahay in lagu hayo Xubnaha Kaadhka ee ku xidhan adduunka madadaalada in ka badan 25 sano.
Furitaanka Noofembar 20, 2021, UBS Arena ee Belmont Park waxaa loo sameeyay muusig waxaana loo dhisay xeegada. Madadaalada iyo madadaalada ugu cusub ee New York iyo guriga Jaziirada New York waxaa la horumariyay iyadoo lala kaashanayo Kooxda Oak View, Jaziirada New York, iyo Jeff Wilpon. Siinta kobcinta dhaqaalaha gobolka, gaar ahaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha uu si weyn u saameeyay masiibada, goobta madadaalada ee heer caalami, oo leh naqshad aan waqti lahayn iyo mid qadiimi ah, waxay ku xidhi doontaa taariikhdeedii hore ee tignoolajiyada casriga ah iyo adeegyada maanta.
$1.1 bilyan oo ujeedo badan leh, gobolka fanka ayaa martigelin doona in ka badan 150 munaasabadood oo waaweyn sanadkiiba iyadoo la bixinayo waayo-aragnimo madadaalo toos ah oo aan isbarbardhigin oo ay ku jiraan muuqaalo cadcad iyo acoustics. UBS Arena waxaa loogu talagalay inay qabato ilaa 19,000 oo qof riwaayadaha iyo daawadayaasha ilaa 17,000 ee ciyaaraha NHL. Dadaalka lagu dhisayo mustaqbal cagaaran, UBS Arena waxay ku talo jirtaa inay dhexdhexaad ka noqoto kaarboon hawlgallada ka hor 2024, taas oo ka dhigi doonta garoonkii ugu horreeyay ee sidaas lagu sameeyo badda bari ee Maraykanka.
Waxay ku taal dhulka taariikhiga ah ee Belmont Park, UBS Arena waxay ku taal in ka yar 15 mayl labadaba JFK iyo LaGuardia Airports, waxaana lagu heli karaa iyada oo loo marayo baabuurka iyo wadaagga raacitaanka meelaha 26A, 26B, iyo 26D ee ka baxsan Cross Island Parkway. Martida isticmaalaya Waddada Tareennada Long Island, UBS Arena waxay marin u noqon doontaa socotada Bariga iyo Galbeedka ee ku sugan saldhigga Queens Village LIRR, socotada Eastbound ee saldhigga cusub ee Elmont Station (la geli karo Westbound ee Dayrta 2022), iyo iyada oo la sii marayo saldhigga Belmont Spur, Ka shaqaynta Jamaica maalmaha dhacdooyinka oo keliya. Marka lagu daro Waddada tareenada ee Long Island, goobta ayaa sidoo kale laga heli karaa iyada oo loo marayo Wadooyinka Baska ee MTA Q2 iyo Q110 iyo Adeegga Baska ee Degmada Nassau Inter-Express N6.
Caafimaadka iyo badbaadada qof kasta oo jooga bandhigyada Jacaylka Dalxiiska ee soo socda ee Harry Styles, dadka tigidhada haysta waa inay keenaan caddayn buuxda oo ah tallaalka COVID-19 ama baadhis taban 48 saacadood gudahooda dhacdada, marka lagu daro xidhashada maaskaro. Carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano ayaa laga yaabaa inay ka soo qaybgalaan riwaayadda haddii ay keenaan caddaynta tijaabada COVID-19 ee xun ee la qaaday 48 saacadood gudahooda ee bandhigga.
Intaa waxaa dheer, dhammaan shaqaalaha goobta ee bandhig kasta waxay sidoo kale raaci doonaan isla borotokoolka waxayna u baahan doonaan inay bixiyaan caddaynta tallaalka COVID-19 oo buuxa ama natiijada baaritaanka xun 48 saacadood gudahood, iyo sidoo kale xidhashada maaskaro mar kasta. Baahida waji-xidhka iyo baadhista, ama caddaynta tallaalka, waa habka ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo caafimaadka iyo badbaadada shaqaalahayaga iyo taageereyaasha waxaanu si dhakhso ah u noqonayaa heerka cusub ee riwaayadaha ee Maraykanka. Ma jiri doonto wax ka reeban siyaasadahan. Taageerayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay booqdaan UBS Arena boggeeda si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.